ဘင်လာဒင်တော့..သေရှာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘင်လာဒင်တော့..သေရှာပြီ
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on May 4, 2011 in Copy/Paste | 11 comments
၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မနက် ၁း၃၀ နာရီ
ပါကစ်စတန်နိုင်ငံ Abbotabad မြို့ 
ညသည်မှောင်မိုက်လျက်။ ကမ္ဘာကျော် နာမည်ကြီး အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် အိုစမာ ဘင်လာဒါအား ချေမှုန်းပစ်ရန်အတွက် အမေရိကန် ရဟတ်ယာဉ်များသည် ပါကစ်စတန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ နံရံအမြင့်များ ဖြင့် ၀ိုင်းရံထားသော စံအိမ်တခုဆီသို့ ဦးတည်ပျံသန်းလျက်။
အာဖဂန် နစ်စတန် နိုင်ငံ၏ တောတောင်လျှိုမြောင်များအကြားတွင်ပုန်းခိုနေသည်ဟု အများက ယူဆလျက်ရှိသော ဘင်လာဒင်သည်ကား ပါကစ်စတန်နိုင်ငံ မြို့ တော် အစ်စလန်မာဘတ်၏မြောက်ဘက် ၆၂ မိုင်ခန့် အကွာရှိ Abbotabad မြို့အတွင်းရှိ ဒေါ်လာ ၁ သန်းတန် ခြံဝန်းကျယ်အတွင်းရှိ သုံးထပ်အဆောက်အဥိးအတွင်း ပုန်းအောင်း နေထိုင်လျက်ရှိနေပေသည်။ ခြံဝန်းကျယ်ကြီးအား အမြင့်ပေ ၁၂ ပေမှ ၁၈ ပေခန့် မြင့်သော နံရံမြင့်ကြိးများဖြင့် ကာရံထားပြီး နံရံမြင့်များပေါ်တွင် သံဆူးကြိုးခွေများဖြင့် အတားအဆီးများပြုလုပ်ထားသည်။ လုံခြုံရေးဂိတ် ၂ ခုလဲရှိပြီး ခြံဝန်းအတွင်းတွင်လည်း စည်းရိုးအထပ်ထပ် အပိုင်းလိုက် ကာရံထားသည်။ အဆောက်အဦမှာကား သုံးထပ်အဆောက်အဦဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်မှာ ဤခြံဝန်းအတွင်း ဖုန်းနှင့်အင်တာနက်ဆားဗစ်များ လုံးဝ မရှိခြင်းပင်။ နောက်တချက်ကား ဤခြံဝန်းသည် ပါကစ်စတန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများ မွေးထုတ်ပေးရာ စစ်ဘက် သင်တန်းကျောင်း မှ ကိုက် ၈၀၀ ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိနေခြင်းပင်။
ခြံဝန်းကျယ်ကြီး နှင့်အဆောက်အဦအား လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ခန့် ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုခန့် မှန်းရသည်။
Abbotabad မြို့ သည်ကား စ်ိမ်းစိုသော တောင်တန်းများပတ်လည်ဝိုင်းလျက်ရှိသည့်ချိုင့်ဝှမ်းအတွင်းတည်ရှိပြီး နွေရာသီအပန်းဖြေစခန်းမြို့ အဖြစ်ကျော်ကြားသောဒေသတခုဖြစ်သည်။ ဤဒေသအတွင်း လူနေအိမ်ခြေများ အများအပြား တည်ဆောက်လာကြသော်လည်း ဤခြံဝန်းကြီးသည် ထိုအနီးတ၀ိုက်တွင် အကြီးဆုံးနှင့်အစောင့်အရှောက်အထူထပ်ဆုံးဖြစ်နေသည်မှာလည်း ဒေသခံတို့ အတွက် သတိပြုစရာတခုပင်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ စုဆောင်းလာခဲ့သော လျို့ ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်ခြေရာခံရင်း ဘင်လာဒင်နေထိုင်ရာ Abbotabad ခြံကျယ်ကြီးနှင့် လျှို့ ဝှက်အဆက်အသွယ်လုပ်နေသူတဦးအား ခြေရာကောက်မိလာခဲ့ရာမှအစပြု၍ ဤ စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းပင်။
အမေရိကန်သမတ အိုဘားမားက ဤစစ်ဆင်ရေးအား ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့ က အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ညအမှောင်ထဲတွင် မြေပြင်ကွန်မန်ဒိုများက ခြံဝန်းကျယ်အား ၀ိုင်းရံထားပြီး ရဟတ်ယာဉ်များက အပေါ်တွင်ပျံဝဲလျက်စစ်ဆင်ရေးအားစတင်လိုက်သည်။
ရုတ်တရက်ဆိုသလို မြေပြင်မှ စတင်ပစ်ခတ်လိုက်ရာ ရဟတ်ယာဉ်တဆင်းပျက်ကြသွားခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ခြံဝန်းတခုလုံး မီးလောင်ပြင်အဖြစ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ ကြာမြင့်ချိန်မှာ မိနစ် ၄၀ ဖြစ်သည်။အဖမ်းခံရန် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဘင်လာဒင်က ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆိးခဲ့သည်။ နဖူးတွင်ကျည်ဆန်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့သည်။
ဘင်လာဒင်၏ ရုပ်အလောင်းအား အမေရိကန်တို့ ကသယ်ဆောာင်သွားခဲ့ပြီး DNA စစ်ဆေးအတည်ပြုချက်များအရ ဘင်လာဒင်ဟုတ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။မွတ်စလင်ထုံတမ်းအရ ပင်လယ်ပြင်တွင် သင်္ဂြီုလ်ပေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်မှပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်လာဒင်၏ သားတယောက်, လျို့ ဝှက်သတင်းပို့ ဆောင်ပေးသူ ၂ ယောက် နှင့် မိန်းမ(အငယ်ဆုံး) ဟုယူဆရသူ အမျိုးသမီးတဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း။ သားဖြစ်သူအားအတည်ပြုချက် မပြုသေးကြောင်းသိရှိရသည်။
ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျခြဲ့ခင်းမှာ စက်မှုဆိုင်ရာ ချို့ ယွင်းမှုကြောင့်ဟု အမေရိကန်တို့ မှပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုရဟတ်ယာဉ်အား နည်းပညာလုံခြုံရေးအရ ဖျက်စိးပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် crew member များသည်အခြားရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ခွါခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်စစ်ဘက်မှပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်ဆင်ရေးအတွင်း ပါကစ်စတန် စစ်ဘက်မှ လုံးဝပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အမေရိကန် တပ်များဖြင့်သာ ဆင်နွဲခဲ့ကြောင်း၊ ပါကစ်စတန်တို့ အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာသာအကူအညီပေးခဲ့ကြောင်း ပါကစ်စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်လာဒင် လက်နက်မဲ့ချိန် ပစ်သတ်ခံရ
အမေရိကန် အထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အယ်လ်ခိုင်းဒါး (al-Qaida) ခေါင်းဆောင် အိုစမာ ဘင်လာဒင် (Osama bin Laden) သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာ ဘင်လာဒင်ဆီမှာ လက်နက်ရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ အိမ်ဖြူတော်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူ့ဆီမှာ လက်နက်မရှိပေမဲ့လည်း အမေရိကန် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြန်ပြီး ခုခံခဲ့တယ်လို့ အိမ်ဖြူတော် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျေ ကာနီ (Jay Carney) က သတင်းထောက်တွေကို မနေ့က ပြောခဲ့တာပါ။ ဖြစ်ပျက်ပုံ အသေးစိတ်ကိုတော့ သူက ရှင်းမပြပါဘူး။
ဘင်လာဒင်ဟာ ဦးခေါင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ကို အပစ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဘင်လာဒင်ရဲ့ ဇနီးတဦးကလည်း ၀င်ရောက်စီးနင်းကြတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆီကို ကမန်းကတန်း ၀င်ပြေးလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကို သေနတ်ထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့ မသေဆုံးခဲ့ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီစီးနင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို လူအများသိအောင် ထုတ်ပြန်သင့်၊ မပြန်သင့် ဆိုတဲ့ကိစ္စ အမေရိကန်ဘက်က စဉ်းစားနေပါတယ်။
ဘင်လာဒင် ရှိနေခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦး ခြံဝင်းထဲမှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကနေ တဆင့် တခြား အရေးပါတဲ့ ပစ်မှတ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို သိနိုင်ဖို့နဲ့ ဘင်လာဒင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ အချိန်ကြာကြာ နေခွင့်ရခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတွေကို ဆက်ပြီး သိလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့အကြောင်း အိမ်ဖြူတော် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျေ ကာနီက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
အိုစမာဘင် လာဒင် သုတ်သင်မှု လျှို့ ဝှက် စစ်ဆင်ရေး ဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယို မှတ်တမ်း များ ထုတ်လွှင့် တော့မည်
အိုစမာဘင် လာဒင် အား နေဗီ ဆီးလ် အဖွဲ့၆ မှ ရှင်းလင်းမှု မှတ် တမ်း ဗီဒီယို ကို အမေရိကန်
ပြည်ပ ထောက် လှမ်းရေး ဌာန က မကြာခင် ထုတ်လွှင့် တော့ မည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။အိုစမာ
ဘင်လာဒင် ၏ ကျောင်း(ဂျက်ဒါ တက္ကသိုလ်) နေဘက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဦး မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ
ရန်ကုန် မြို့ တွင် နေထိုင်သည်။
၁. ပါကစ္စတန် စစ်တက္ကသိုလ် နှင့် တစ်မိုင် မှ ပင် မဝေးသည့် နေရာတွင် ခြောက် နှစ် ကျော်ကြာ
၂. လွန်ခဲ့သည့် ခြောက် နှစ် ကျော် ကတည်း က ကူဝိတ် နိုင်ငံ မှ သူ၏ ဆက်သား တစ်ဦး နှင့် ဘင်
လာဒင် ဆက်သွယ် ပုံ ကို ခြေရာ ခံ နိုင်ခဲ့ပြီး လိုက် လံစုံစမ်း ရာ ရုပ်လုံး ပေါ်လာ ခဲ့သည်။
၃. ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တွင် အမေရိကန် တပ်များက ပါကစ္စတန် တပ် များ ကို စစ်သင်တန်း များ ပေးခဲ့
သည့် နေရာသည် ယခု အိုစမာ ဘင်လာဒင် နေထိုင်သည့် နေရာနှင့် ကိုက် ၁၀၀ ခန့် သာ ဝေးသည်။
၄. ပစ်မှတ်နေရာ ကို ၀င်ရောက် စီးနင်းချိန် တွင် အိုစမာဘင်လာဒင် ဉ် လက်နက် မရှိ သော်လည်း
သူက တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ကို လက်နက်မဲ့ ပြန်လည် ခုခံမှု လုပ်ပြီး သူ၏ ပဉ္စမ မြောက် အသက် ၂၉ နှစ်
အရွယ် ဇနီး ကို အရှင်ဖမ်းဆီး ရမိသည်။
( ဒီသတင်းရဲ့ဆိုက်မှာ ထူးဆန်းတာလေးက သတင်းကိုပါ Like or Dislike လုပ်ထားပြီး
ယ္ခု ကူးယူတဲ့အချိန်ထိ Like က3ခုနဲ့ Dislike က2ခုရထားတယ် ဘာကြောင့် Dislike လဲမသိ
ကြည့်ရတာ သက်ဆိုင်ရာ တပည့်သားခြင်း အဖွဲ့ဝင်တွေက လက်မခံနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိမယ်ထင်တယ် )
ဘင်လာဒင် သေပြီးနောက် အမေရိကန် လုံခြုံရေး သတိပေး
အယ်လ်ခိုင်းဒါး (Al Qaeda) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အိုစမာ ဘင်လာဒင် (Osama Bin Laden) သေဆုံးသွားပေမဲ့ အယ်လ်ခိုင်းဒါး အဖွဲ့နဲ့ အလားတူ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေအပေါ် ချေမှုန်းမှုတွေကတော့ ရပ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) က ပြောပါတယ်။
အပြစ်မဲ့သူတွေကို သတ်ဖြတ်နေသူတွေကို အမေရိကန်က မနားမနေ လိုက်လံ ရှာဖွေနေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ကြီး ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ရှိနေတဲ့ တာလီဘန်တွေကိုလည်း အမေရိကန်က ဆက်ပြီး တိုက်ခိုက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံခြားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အမေရိကန်တွေ၊ နိုင်ငံခြားခရီး သွားကြမယ့် အမေရိကန် ခရီးသည်တွေကို အထူးသတိရှိကြဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက နှိုးဆော်ချက် ထုတ်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းအတွက် ထုတ်ပြန်တဲ့ ခရီးသွား နှိုးဆော်ချက်မှာ ဘင်လာဒင်ကို သုတ်သင်မှုကြောင့် တချို့ဒေသတွေမှာ အမေရိကန် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
အဲဒီလို နေရာမျိုးမှာ ရှိနေကြတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ အိမ်အပြင်၊ ဟိုတယ်အပြင် သွားတဲ့အခါ အကန့်အသတ်နဲ့ သွားသင့်သလို လူအများ စုဝေးတဲ့ နေရာတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်း ရှောင်ရှားကြဖို့ သတိပေးချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြား ရောက်နေကြတဲ့ အမေရိကန်တွေ အနေနဲ့ အဲဒီနိုင်ငံက သတင်းတွေကို အမြဲမပြတ် နားစွင့်ထားဖို့နဲ့ နီးစပ်ရာ အမေရိကန်သံရုံး ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ဖို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။
သံရုံးတွေ၊ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေကလည်း လိုအပ်လာရင် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေကို အရေးပေါ် ဝန်ဆောင်မှု အတတ်နိုင်ဆုံး ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် အစိုးရရုံးတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေမှာ လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားပြီး လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်လာရင် အများပြည်သူ ဝင်ထွက်နိုင်မှုကို ယာယီ ပိတ်ကောင်း ပိတ်နိုင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။
ဘီလူးတင်ထားတဲ့ပုံက အတုကြီးပါလို့ စီအန်အန်သတင်းဌာနက ပြောပါတယ်။ ၁၉၉၈ခုနှစ်တုန်းက ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရိုက်ထားတဲ့ ဘင်လာဒင်ရဲ့ပုံနဲ့ လူသေအလောင်းပုံ တို့ကို ပေါင်းစပ်လုပ်ထားတာလို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် ဂါဒီးယန်းသတင်းစာက ဆိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းဦးဓာတ်ပုံ သိရအောင် တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ…
(CNN) — A graphic image of what was reported to be Osama bin Laden’s bloodied face, which went viral on the Internet and was plastered on the front page of newspapers around the world, isafake.
The doctored image blanketed the Internet in the hours after bin Laden’s death and was picked up by news groups far and wide, in places like Pakistan, Afghanistan, Senegal and Iraq.
Meanwhile, U.S. officials are weighing whether to release an actual image of bin Laden’s corpse. A photograph could help to convince doubters about his death, but it also could inflame passions against the United States.
A second government official familiar with intelligence matters said deliberations are leaning towardarelease, but emphasized that the decision “isn’t unanimous and everyone has understandable hesitation.”
ပုံတွေ ဒီနေ့အထိ..ထုတ်သင့်မထုတ်သင့်စဉ်းစားနေဆဲမို့ … အပြင်မှာ တင်တဲ့ပုံတွေအကုန်..အာရွှီး-အင်ထုထားတာချည်းပါပဲ..။
စီအိုင်အေက ရွေးထုတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့..အိမ်ဖြူတော်က လူထုကို ထုတ်ပြန်ပေးဖို့… စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပါတယ်..။
ကြုံလို့ပြောရရင်… ဘင်လာဒင်အလောင်းနဲ့အတူတူ… အဲဒီအိမ်က..အထောက်အထား..မှတ်တမ်းတွေတော်တော်များများ.. ဆီးလ်တင်းမ်ဆစ်ခ်က မ,သွားတာ..။
မကြာခင် အတွဲလိုက်ကြီး ..ကွိနိုင်ကွနိုင်တယ်ထင်တာပဲ..။
Thank you for your excellent posting in Burmese.
Should you consider changingaword in the posting’s title?
Specifically, whether or not, to drop the word “shar” as in “tay shar pyi,” for obvious reasons.
As you are aware, “shar” connotes “sympathy.” (Sympathy for Bin Laden might inadvertently translate into “no sympathy” for the US team who took the “master terrorist” out)
Should we feel sorry or pity forahead mass murderer?
Example: Activists want to take various country leaders to International Court. It’s for genocide practiced against their own or other people.
Not only terrorizing and murdering innocent people in America, Philippines, Spain, …, Bin Laden’s extremist Al Qaeda organization also hit other muslims around the world, as in Indonesia, Turkey, Africa, Saudi Arabia, Iraq, ….
သွားမပြောနဲ့ဗျို့။ ဘီလူးက ရုရှားပြန်စစ်ဗိုလ်လူထွက်… သူကလူသာထွက်လိုက်တာ တပ်ထဲက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ထစ်ခနဲရှိ အမေရိကန် စီအိုင်အေလက်ချက် ဆိုတဲ့အစွဲ မပျောက်သေးဘူး။ သိပ်လည်း မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ၊ စီအိုင်အေ ဒီလောက်မစွမ်းပါဘူး။ ဘင်လာဒင်ကိုတွေ့တာ သမတအိုဘားမား အကြားအမြင်ဆရာကို သွားမေးလို့ပါ။ ဘယ်လိုဆိုတာ အသေးစိတ်ပြောလိုက်ရင် ရုပ်ဝါဒီတွေ လိမ္မာကုန်အုံးမယ်။ ရွာထဲမှာ လူဆိုးလူပေတွေလည်း ရှိအုံးမှ….
ဘင်လာဒင် တယောက် ပါကစ္စတန်မှာ မသေခင်စိတ်ကြိုက်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာက ကြီးစွာသော သံသယတွေရှိနေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ လဘ်စားစည်းကမ်းပျက်မှုမှာ နံမယ်ကြီးခဲ့သလို လက်ရှိသမ္မတ ဇာဒါရီ (လုပ်ကြံခံရသူ ဘူတိုရဲ့ခင်ပွန်း) ဟာ Mr 50% လို့နံမယ်ကြီးခဲ့ရအောင် အခွင့်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရဟာ လူထိခိုက်သေဆုံးမှုကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးဗျူဟာ ကိုခု (၁၉) ရာစုကစပြီးတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ စစ်ဆင်ရေး လုပ်တဲ့နည်းဗျူဟယတွေ ဟာ တကယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကောင်းစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပေမဲ့ ပျောက်ကျားနည်းကိုတော့ လိုက်မမှီသေးပါဘူး။ ဘင်လာဒင်ကို ဆယ်စုနှစ်တခုလုံးအနံ့ခံ လိုက်နေရာက ခုကျမှ သူက အထိန်းအသိမ်းမဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ ဘွားကနဲ့ပေါ်ပေါက်လာသလို၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ စစ်ဆင်ရေးလောက်မှာ တော်တော်ဂယက်ရိုက်နေပါပြီ။
ဥပမာ တခုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကခေတ် မှာစစ်ရေးမှာထိပ်တန်းရာထူးရှိခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင် ကို ကယ်ထုတ်ရာမှာ မြန်မာစစ်တပ်က နည်းမျိုးစုံးသုံးပြီး ကြိုးစားပေမဲ့ အရာမထင်လို့ လက်မှိုင်ချနေချိန်မှာ၊ Gorilla ပျောက်ကျားစနစ်မှာ တဖက်ကမ်းခတ်တဲ့ ရန်ကုန်ဘဆွေ က ၀င်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓကရှိပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ဘင်လာဒင်ကိုပါကစ္စတန်အစိုးရက ကြိုးရှေရှေနဲ့ လှန်ထားပြီးအမေရိကန်အစိုးရဆီက ငွေချူနေတာ၊ ခုဆယ်စုနှစ်မှမဟုတ်ပါဘူး။
ကမ္ဘာမူးယစ်ဈေးကွက်မှာ ပါကစ္စတန်/အာဖဂန်နစ္စတန် က Golden Crescent နဲ့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင်အပြိုင်ကြဲနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Golden Triangle က ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာကို FBI က၀ါးရမ်းထုတ်ပြီးမြေလှန်ရှာနေချိန်မှာ ခွန်ဆာတယောက် ရန်ကုန်က ဗိုလ်ချုပ်တွေ အိမ်မှာဝင်ထွက်ဥဒဟိုလုပ်ရင်း ရန်ကုန်အနှံ့ မှာ သူ့ခြေရာတွေ ထပ်နေတာလူတိုင်းအသိပါ။ ဘာတဲ့ ဦးခွန်ဆာ လို့ခေါ်ပါလို့တောင်ပညတ်ခံခဲ့ရတာလူတိုင်းအသိမဟုတ်လား။ အကာအကွယ်ပေးခံရတဲ့ အထောက်အထားတွေ မမြင်ချင်အဆုံးပါ။ နောက်ဆုံး အမေရိကန်အစိုးရက ကမ်းတက်တပ်နဲ့ အတင်းဝင်မှဘဲ ကိစ္စပြီးသွားပါတော့တယ်။ လုပ်သင့်တာကြာပါပြီ။ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အရှေ့ဖျားနိုင်ငံတွေ ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကွာခြားသလို၊ တွေးခေါ်ပုံချင်းလဲကွာပါတယ်။ ဘင်လာဒင် အမေရိကန်ကရှာတွေ့ပြီးကိစ္စတုံးလုပ်လိုက် နိုင်တာကို terrorist ရွံမုန်းကြသူနိုင်ငံတွေ ကလက်ခမောင်းခတ်ဝမ်းသာကြပေမဲ့၊ အကြောင်းသိနိုင်ငံတွေ (middle-east နဲ့ Asia နိုင်ငံတွေ က) သူ့ကိုဆယ်စုတခုကြာအောင် ရှာနေတဲ့ အမေရိကန်ကိုကြည့်ပြီး တခွိခွိဖြစ်နေကြမှာမြင်ယောင်ပါသေးတယ်။
( ဒါက ဦးမိုးညိုရဲ့ကော်မန့်နဲ့ဆက်စပ်နေတယ် )
ဘင်လာဒင် စုံစမ်းရေး နိုင်ငံတကာ ပျက်ကွက်မှုအဖြစ် ပါကစ္စတန် အပြစ်တင်
ပါကစ္စတန်စစ်တပ် အခြေစိုက်တဲ့မြို့မှာ အိုစမာ ဘင်လာဒင် (Osama bin Laden) နေထိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် ရှင်းလင်းချက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ဘင်လာဒင်ကို အချိန်မီ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိတာဟာ ကမ္ဘာ့ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတဲ့ အကြောင်း ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ထောက်လှမ်းရေးဘက်က ညံ့ဖျင်းမှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီညံ့ဖျင်းမှုဟာ တခြား ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ် ယူဆွတ်ဖ် ရာဇာ ဂီလာနီ (Yousuf Raza Gilani) က ပဲရစ်စ်မြို့မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောလိုက်တာပါ။
အိုစမာ ဘင်လာဒင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အဘော့တာဘက် (Abbottabad) မြို့ကအိမ်ကို ၀င်စီးပြီး အမေရိကန် ရေတပ် အထူးတပ်ဖွဲ့တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က သုတ်သင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ တသန်း လောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ ပါကစ္စတန် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ သူ အဲဒီမှာနေတယ် ဆိုတာကို မသိဘဲ အယ်လ်ခိုင်းဒါး (al-Qaida) ခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင် ဒီလောက် နှစ်ကြာကြာ ဘာကြောင့် နေနိုင်သလဲ ဆိုတာကို အဖြေပေးဖို့ အမေရိကန် အရာရှိတွေက လိုလားနေကြတာပါ။
ဘင်လာဒင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဟာ ပါကစ္စတန်စစ်တပ်နဲ့ အရမ်းနီးလွန်းနေတာကြောင့် ဘင်လာဒင် အဲဒီမှာ နေတယ် ဆိုတာကို ပါကစ္စတန် ထောက်လှမ်းရေးက သိကိုသိရမယ်လို့ အာဖဂန်နစ္စတန် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ကိုတော့ ပါကစ္စတန် ရဲနဲ့ စစ်သားတွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ ၀ိုင်းရံထားကြတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်လာဒင်ကို အကာအကွယ် ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပါကစ္စတန်ဘက်ကတော့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
ပါကစ္စတန်အစိုးရက ဘင်လာဒင် လက်ရ(သို့)အသေရရှိရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွ မလုပ်တာဖြစ်နိုင်သလို၊ တတိယနိုင်ငံတွေ ကအစိုးရတွေ နဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတို့ရဲ့ အဌာကိုကောင်းစွာနားမလည်တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်လဲပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်တခုက ပျောက်ကျားစနစ်သုံးဘို့ (လူအားသုံးဘို့) ၀န်လေးတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ဗျူဟာလံပါပါလိမ့်မယ်။ နိုင်းအလဲဗင်းအပြီး အာဖဂန်စစ်ဆင်ရေးကြီးအပြီးမှာ၊ ဘင်လာဒင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခါစမှာ လူအားသုံးစစ်ဆင်ခဲ့ရင် သူ့ကိုအရှင်မဟုတ်တောင်၊ အသေရနိုင်ပါတယ်။ ခွန်ဆာလိုလူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာဥဒဟိုသွားလာနိုင်တာကို အမေရိကန်အပါအ၀င်နောက်နိုင်ငံတွေ ကကောင်းစွာနားမလည်နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေအနေနဲ့ ကတော့ ထူးပေမဲ့မဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့၊ လူထုကိုနိုင်ချင်တိုင်းနိုင် နေနိုင်တဲ့ ပါကစ္စတန်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ ဘင်လာဒင်လိုလူမျိုး တံခါးမရှိဒါးမရှိသွားလာနေနိုင်တာကို မသိဘူးဆိုတာယုံရခက်ကြီးပါ။